ISamwu ithi akuyona eshise ihholo ledolobha | News24
ISamwu ithi akuyona eshise ihholo ledolobha
Bloemfontein – Amalungu eSamwu akuwona ashise ihholo laseMangaung, kusho usihlalo wenyunyana esifundazweni, uCongo Matshepe, etshela iNews24 ngoLwesithathu ebusuku.
"Besilinde ubuholi bukazwelonke edolobheni. Ngesikhathi silindile ngokuthula, amaphoyisa ahlakaze abasebenzi ngezinhlamvu zenjoloba nangama-stun grenade."
UMatshepe uthe, ngemuva kokuhlakazwa kwabasebenzi, kubonakale sekusha ihholo.
OLUNYE UDABA: Kudutshulwe kwabulawa umsolwa, kwalimala abane bezama ukuduna imoto
"Amaphoyisa asuse lento. Ngesikhathi edubula ngezinhlamvu zenjoloba, ngemuva kwemizuzwana nje, sibone sekusha ibhilidi.”
UMatshepe uthe iSamwu izohlangana nezikhulu zikamasipala ngoLwesine ukuhlola umonakalo nokudingida ngezimfuno zenyunyana.
NgoLwesithathu ekuseni, iSamwu ibhalele umasipala incwadi iwazisa ukuthi izongenela isiteleka ngokugcwele. Inyunyana ibinethemba lokuthi izohambisa incwadi yezikhalazo, ifuna izinto ezingaphezu kwezingu-20.